Roth v ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်ကဆုံးဖြတ်ချက်
အခမဲ့မိန့်ခွန်း, ညစ်ညမ်းသော, & တရားရုံးချုပ်များတွင်ဆင်ဆာ
ညစ်ညမ်းမှုကဘာလဲ? ဤအရှေ့မှာ ထား. မေးခွန်းခဲ့ တရားရုံးချုပ် Roth v ၏ဖြစ်ရပ်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု 1957 ခုနှစ်တွင်အစိုးရကအဖြစ်တစ်ခုခုတားမြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ "ညစ်ညမ်းသော," ထို့နောက်ကြောင့်ပစ္စည်း၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပြင်ပမှာကျရောက် ပထမဦးစွာပြင်ဆင်ရေး ။
ရှိလျှင်ယင်းသို့ "ညစ်ညမ်းသော" ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရန်ဆန္ဒရှိသူများသည်ဆင်ဆာဆန့်ကျင်လည်ကုစား, အနည်းငယ်သာရှိပါလိမ့်မယ်။ တောင်မှပိုဆိုး, ညစ်ညမ်းမှု၏စွပ်စွဲချက်ဘာသာရေးရိုးအမြစ်ကနေလုနီးပါးလုံးဝရပ်တ။
Roth v ဖို့ဘာခဲ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု?
ကတရားရုံးချုပ်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်အခါ, ဒီအမှန်တကယ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်။ Roth v အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ Albert v ကယ်လီဖိုးနီးယား။ ။
ရောင်းအားကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံရန်မြို့ပတ်ရထားများနှင့်ကြော်ငြာကိစ္စသုံးပြီးရှမွေလသည် Roth (1893-1974) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရောင်းချစာအုပ်များ, ဓာတ်ပုံများ, နှင့် New York မှာမဂ္ဂဇင်း။ သူဟာဖက်ဒရယ်ညစ်ညမ်းမှုပညတ်တော်ချိုးဖောက်ညစ်ညမ်းသောမြို့ပတ်ရထားများနှင့်ကြော်ငြာအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောစာအုပ် mailing ၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်:
တိုင်းညစ်ညမ်းသော, အဓမ္မကျင့်ခြင်း, သို့မဟုတ်ညစ်ညူးသောစာအုပ်, လက်ကမ်းစာစောင်, ရုပ်ပုံ, စက္ကူ, အက္ခရာ, အရေးအသား, ပုံနှိပ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမစင်ကြယ်သောအကျင့်စရိုက်၏အခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း ... nonmailable ကိစ္စဖြစ်ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ် ... သူမည်သည်ကားမေးလ်သို့မဟုတ်ပို့ဆောင်မှုများအတွက်သိလျက်သိုက်, ဘာမှ nonmailable ဖြစ်ဤအပိုင်းကိုတို့ကကြေညာခြင်းသို့မဟုတ်သိလျက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့သို့မဟုတ်တို့ကိုစွန့်၏ရည်ရွယ်ချက်, သို့မဟုတ်စောင်ရေသို့မဟုတ်၎င်းသဘောထားအတွက်အကူအညီပေးနေတာ၏မေးလ်ကနေအတူတူပင်ကြာ, $ 5000 သို့မဟုတ်ထောင်ချထက်မပိုသောငါးနှစ်ကြာထက်မပိုဒဏ်ရိုက်ခံရကြလိမ့်မည် , ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး။
ဒါဝိဒ်သည် Albert Los Angeles မြို့ကနေမေးလ်ယူမှုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ပွေးလေ၏။ သူ lewdly ရောင်းရန်ညစ်ညမ်းသောနှင့်မစင်ကြယ်သောစာအုပ်များစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူသူ့ကိုစွဲချက်တင်ထားတဲ့အမှားတွေတိုင်ကြားချက်အောက်တွင်ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။ ဒါကတာဝန်ခံကယ်လီဖိုးနီးယားပြစ်မှုဆိုင်ရာဉပဒေချိုးဖောက်, ရေးသားခြင်းရေးသားခြင်း, သူတို့တစ်ဦးညစ်ညမ်းသောကြော်ငြာထုတ်ဝေပါဝင်သည်:
; တကာနှင့် lewdly ... ရေးသားခဲ့သည် composes, ကျပုံစံ, ထုတ်, ထုတ်ဝေရောင်းချ, ဖြန့်ဝေ, ရောင်းချဘို့စောင့်ရှောက်, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်မစင်ကြယ်သောအရေးအသား, စက္ကူ, ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်ထားပါတယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းများ, မိတ္တူ, ဆှဲ, သုတ်ဆေး engraves, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ပြင်ဆင်; သို့မဟုတ်မှို, ဖြတ်တောက်မှု, ပျော်စေ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောပုံကို ... တစ်ဦးအမှားတွေထိုက်သော ...
Roth ခုနှစ်, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖက်ဒရယ်ညစ်ညမ်းမှုပညတ်တော်သောပထမဦးစွာပြင်ဆင်ရေး၏ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းရှိမရှိခဲ့ "ကွန်ဂရက်အဘယ်သူမျှမပညတ်တိကလုပ်ရမည် ... စကား, ဒါမှမဟုတ်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် abridging ... "
Albert ခုနှစ်, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကယ်လီဖိုးနီးယားရာဇသတ်ကြီး၏ညစ်ညမ်းမှုပြဋ္ဌာန်းချက်တဆယ်လေးပြင်ဆင်ချက်များကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်အပိုဒ်များကထည့်သွင်းမိန့်ခွန်းနှင့်စာနယ်ဇင်းများ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျူးကျော်ခြင်းရှိမရှိဖြစ်ခဲ့သည်။
45မဲပေး, တရားရုံးချုပ် '' ညစ်ညမ်းသော '' ပစ္စည်းပထမပြင်ဆင်ချက်အောက်မှာအဘယ်သူမျှမကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆိုမျိုးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဖြစ်နိုင်သောမိနျ့များအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာကာကွယ်မှုပေးမထားဘူးသောအဓိကအကြောင်းရင်းအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်:
ပင်နည်းနည်းလေးရှေးလူမှုရေးအရေးပါမှုရှိခြင်းအားလုံးအိုင်ဒီယာ - ထင်မြင်ချက်၏ရေပန်းစားရာသီဥတုဖို့မုန်းတီးမှု Unorthodox စိတ်ကူးများ, အငြင်းပွားဖွယ်စိတ်ကူးများပင်စိတ်ကူးများ - သူတို့ကပိုအရေးကွီးသောအကျိုးစီးပွားများ၏ကန့်သတ်ဧရိယာအပျေါထိပါးသောကွောငျ့မပါဝင်ပါဘဲနေလျှင်, အာမခံအပြည့်အဝကာကွယ်မှုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးစွာပြင်ဆင်ရေး၏သမိုင်းအတွက်သွယ်ဝိုက်ရှေးလူမှုရေးအရေးပါမှုမပါဘဲအဖြစ်ရှင်းရှင်းညစ်ညမ်းမှု၏ငြင်းပယ်ခံရသည်။
သို့သော်သူကိုဆုံးဖြတ် သောအရာကိုနှင့် ", ညစ်ညမ်းသော" မဟုတ်ပါဘူး နှင့်မည်သို့? သူကားအဘယ်သူဘာလုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်ရရှိသွားတဲ့နှင့်မရှိပါဘူး "ရှေးလူမှုရေးအရေးပါမှု?" အဘယ်အရာကိုစံတွင်ကြောင်းပေါ်တွင်အခြေခံသလဲ?
တရားမျှတရေးနန် , အများစုအဘို့စာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းသောဖြစ်မဟုတ်ပေမယ်လို့အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်များအတွက်စံအကြံပြု:
သို့သော်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုပြောရလျှင်မရှိကြပေ။ ညစ်ညမ်းသောပစ္စည်း prurient စိတ်ဝင်စားဆွဲဆောင်တဲ့ထုံးစံ၌လိင်နှင့်အတူဆကျဆံရာပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာ, စာပေ, သိပ္ပံအကျင့်ကိုကျင့်အတွက်လိင်၏ပုံဖော်ခြင်း, ဥပမာ, ပစ္စည်းမိန့်ခွန်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်၏အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုငြင်းပယ်ရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်သူ့ဟာသူမဟုတ်ပါဘူး။ ... ဒါဟာတရားစီရငျညစ်ညမ်းမှုများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများ prurient စိတ်ဝင်စားဆွဲဆောင်တဲ့ထုံးစံ၌လိင်ဆက်ဆံပါမပစ္စည်းများအတွက်မိန့်ခွန်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကာကှယျစောငျ့ရှောကျ သို့ဖြစ်. အရေးကွီး၏။
ဒီတော့ prurient အကျိုးစီးပွားမှမဆိုအယူခံဝင်စရာ "ရှေးလူမှုရေးအရေးပါမှု" ရှိပါသလော Prurient လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်အလွန်အကျွံအကျိုးစီးပွားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ လိင်နှင့်ဆက်စပ် "လူမှုရေးအရေးပါမှု" ၏ဤအမှုကင်းမဲ့ခြင်းဟာ traditionalist ဘာသာရေးနှင့်ခရစ်ယာန်ရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြွင်းမဲ့အာဏာကွဲပြားခြင်းများအတွက်တရားဝင်လောကအငြင်းပွားမှုများမျှရှိနေပါသည်။
ညစ်ညမ်းမှု၏အစောပိုင်းဦးဆောင်စံပစ္စည်းအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များအပျေါမှာသီးခြားကောက်နုတ်ချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်မျှသာစစ်ကြောစီရင်ခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ တချို့ကအမေရိကန်တရားရုံးများကဒီစံမွေးစားပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်များကပယ်ချခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားနောက်ပိုင်းမှာတရားရုံးများကဒီစမ်းသပ်မှုအစားထိုး: ရှိမရှိခေတ်ပြိုင်အသိုင်းအဝိုင်းစံချိန်စံညွှန်းများလျှောက်ထားပျမ်းမျှလူတစ်ဦး, prurient စိတ်ဝင်စားတစ်ခုလုံးအယူခံအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းများ၏ကြီးစိုးဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
ဤအမှုများတွင်အနိမ့်တရားရုံးများပစ္စည်း prurient အကျိုးစီးပွားမှအယူခံဝင်ဖြစ်စေမ၏စမ်းသပ်မှုလျှောက်ထားကတည်းကတရားစီရင်ပိုင်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအထူးဗြိတိသျှကိစ္စတွင်, Regina v ။ Hicklin အတွက်တီထွင်စမ်းသပ်မှုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ညစ်ညမ်းမှုများကစစ်ကြောစီရင်ရမည် "ညစ်ညမ်းမှုအဖြစ်တရားစွဲဆိုဒီကိစ္စကို၏သဘောထားကိုအဘယ်သူ၏စိတ်ထဲတွင်ထိုကဲ့သို့သောအကျင့်ပျက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှပွင့်လင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဘယ်သူ၏လက်သို့ဤမျိုးတစ်ထုတ်ဝေဆုံးစေခြင်းငှါသူတို့အ deprave နှင့်အကျင့်ပျက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမ။ " ဆနျ့ကငျြ, Roth v ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအသိုင်းအဝိုင်းစံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းထက်အများဆုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်အခြေခံပါတယ်။
အလွန်များ၏အသိုင်းအဝိုင်းများတွင် ရှေးရိုးစွဲခရစ်ယာန်များသည် , ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်အခြားအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အသေးအဖွဲအဖြစ်မှတ်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးများဖော်ပြဘို့ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူတရားစွဲဆိုခံရနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ဆာဗေးတစ်ခရစ်ယာန်တွေပစ္စည်းမျှမရှေးလူမှုရေးတန်ဖိုးကိုရှိကြောင်းငြင်းနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကို homophobic ဖိနှိပ်မှုမရှိဘဲကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဘယျသို့ဘဝကိုစိတ်ကူးကူညီပေးသည်ကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဗီဂေးဆန့်ကျင်ဘက်ငြင်းနိုင်ဘူး။
ဤအမှုကိစ္စရပ်များ 50 ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်နှင့်အကြိမ်ဆက်ဆက်ပြောင်းလဲပြီနေစဉ်, ဒီထုံးတမ်းစဉ်လာနေဆဲလက်ရှိညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပွားမှုကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ: Mason နှင့်ကမ္ဘာသစ်အမိန့်
Leonardo da Vinci ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ: လူသား, သိပ္ပံပညာရှင်, Naturalist
အနုပညာရှင် Spotlight ကို: ဂျနီဖာ Bartlett
Paula Creamer ကိုယ်ရေးဖိုင်
တစ်ဦး (ရောမ) ဧကရာဇ်ကဘာလဲ?
အဆိုပါ Permian ကာလ (300-250 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသန်း)
ပုထိုးတော်ကြီး - ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မွငျ့မွတျဗိသုကာပညာ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ
ဘယ်လိုမျှမ GUI ကိုအတူ Console အ Applications ကို Build မှ
ဇင့်သတ္တု Get နှစ်ခုနည်းလမ်းများ
အဆိုပါ Bataan မရဏမတ်လ
ည TSA ဗေါင်းစည်းမျဉ်းများ
တစ်ဦး Qipao တရုတ်ဖက်ရှင်အတွက်ဆိုတာဘာလဲ
သောက်သုံးရေ မှစ. ဖလိုရို Remove လုပ်နည်း